आधुनिक fashionistas को प्राथमिकताहरू बीचमा नेता धेरै वर्ष को लागि जोड दिंदै। आदर्श, एक विशेषज्ञ संग राम्रो प्रदर्शन गर्न staining यस प्रकार। तर बजेट विकल्प प्रेमीहरूलाई लागि ठूलो समाचार छ - आफ्नै हात सम्भव जोड दिंदै! तपाईं लामो कपाल छैन भने, तपाईं टोपी मार्फत बुनाई बनाउन सक्छ। यो सबै आवश्यक छ तयार गर्न प्रविधि र प्रदर्शन सिक्न पर्याप्त छ। को occipital क्षेत्र मा काम मद्दत बिना काम गर्नेछ किनभने यो एउटा सहायक ल्याउन उचित छ। टोपी मार्फत बुनाई कसरी बनाउने? यो लेखमा छलफल गरिनेछ।
को लाभ जोड दिंदै
तपाईं कसरी घर मा एक टोपी मार्फत जोड दिंदै गर्न सिक्न अघि, का दाग यस प्रकारको लाभ कुरा गरौं:
स्फूर्तिदायी अनुहार र कपाल रंग, आकस्मिक रंग संक्रमण परहेज।
यो एक दृश्य मात्रा सिर्जना र चम्कने Hairstyles बढवा दिन्छ।
यो regrown जरा संग ठूलो देखिन्छ र छिटो ताजा आवश्यकता छैन।
को संपर्क अलग तत्व हो रूपमा, केश र शिरको धेरै हानि गर्दैन।
यो सबै उमेर लागि साँच्चै कायाकल्प प्रभाव र उपयुक्त प्रदान गर्दछ।
प्रभावकारी फुलेको कपाल लुकाउँछ।
यो को naturalness र प्राकृतिक प्यालेट को आधुनिक रुझान पारस्परिक रहेको छ।
कमीकमजोरी जोड दिंदै
एक टोपी मार्फत जोड दिंदै - छैन त्यस्तो सरल प्रक्रिया। यो विशेष रूप stretching किसिमहरु चरण धेरै समय खपत छ मा, धेरै समय लाग्छ। निम्न बेफाइदा पनि प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ:
कुनै पनि स्पष्टीकरण बाल नोकसान पुग्छ। तपाईं लहर पछि कम्तिमा एक महिना प्रक्रिया प्रदर्शन गर्नु हुँदैन।
यो घर painting गर्दा मद्दत बिना वर्दी आवेदन सिर्जना गर्न असम्भव छ।
सुन्दर देखिन्छ कौशलतासाथ चित्रकला कार्यान्वयन कसरी लेखमा फोटो देखाउँछ। यो आफैलाई गर्न सिक्न कसरी? सबै को पहिलो एक टोपी, मार्फत जोड दिंदै, त्यसपछि परिणाम तपाईं निराश छैन, धैर्य आवश्यक छ। बाल को लम्बाइ अनुमान गर्न यो विधि को बोध लागि भनेर सम्झनुहोस्। यो लामो-haired सुंदरियों लागि उपयुक्त छैन। घरेलू परिवर्तन को लागि टोपी प्रयोग निकै तपाईं यो पहिलो पटक के पनि छ भने, यो प्रक्रिया सरल। सामान्यतया प्लास्टिक, रबर वा सिलिकन टोपी, प्वालहरू एक चेकरबोर्ड ढाँचा मा प्रबन्ध जुन प्रयोग गरिएको। यस्तो उपकरणहरू विशेष विभाग पसलहरुमा बेचिन्छ कहिलेकाहीं यो बाल खींच लागि हुक संलग्न छ।
कसरी स्मार्ट हुन?
तपाईंले खरिद गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने उपयुक्त तयार बनाएको उपलब्ध उपकरण को एक लागि सेट अप: को लागि टोपी एक टाउको आकार फिट गर्न पहिले आवश्यक थियो जो एक प्लास्टिक झोला प्रयोग (यो लिक रोक्न क्रममा सतहमा खासा फिट हुनुपर्छ)। प्वालहरू अग्रिम गर्छन् गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर सीधा परिभाषित अन्तरालहरू भइरहेको किसिमहरु को सूत्रण संग।
व्यावसायिक हुक बुनाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। टाउको को छाला चोट लाग्नु छैन ताकि गर्न, र धेरै ठूलो छैन, मसालेदार लिन हुक, यो झोला मा प्वालहरू poke गर्न सुविधाजनक थियो। हुक सट्टा लामो पातलो टिप संग एक कोर्नु रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर यो शुरुवात लागि कठिन छ कि टिप्पण लायक छ। Polyethylene सबैभन्दा बाक्लो चयन गर्नुपर्छ - यो एक राम्रो परिणाम लागि महत्त्वपूर्ण छ।
स्पष्टीकरण लागि अर्थ: जब कालो कपाल र कठोर फिट 12% brightener काम, यो पातलो खैरो कपाल 3-4-प्रतिशत ध्यान तयार गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीं केही रंग आफ्नो आफ्नै ताले भन्दा हल्का रंग लागू हुन्छ। महत्वपूर्ण: पहिले कपाल मेंहदी संग रंगे भने - यो कारण अप्रत्याशित परिणाम गर्न ताले नै स्पष्ट छैन आवश्यक छ।
मिश्रण लागि कन्टेनर।
को clarifier को लागि आवेदन ब्रश।
Polyethylene (तपाईं पाक पन्नी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: जो प्रतिक्रिया वृद्धि हुनेछ, लागू गरिएको संरचना संग उनको कपाल ढाक्न)।
को काँध वा हेयर सेलून केप मा च्यादर।
को melirovanija चरणमा
आफ्नो बाल COMB, एक टोपी लगाउने र टोपी मा प्वालहरू मार्फत किसिमहरु stretching सुरु गर्न तयार पारे। बराबर चौडाई को किसिमहरु प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै। खरीद प्रयोग गर्दा टोपी किसिमहरु इच्छित परिणाम आधारमा प्वालहरू वा स्लट (दोस्रो र तीव्र विशेषताहरू) मार्फत हरेक प्राप्त गर्न सक्छन्।
संरचना प्रभावकारी टोपी मार्फत किसिमहरु थ्रेडिङ पछि, कन्टेनर मा भंग - तपाईं ताजा तयार को वजन काम गरिने त्यसैले, र यो परिणाम सुधार हुनेछ।
प्वालहरू अक्षर मार्फत थ्रेड को तयार किसिमहरु गर्न मिश्रण लागू हुन्छ। प्रकाश आन्दोलनहरु काम गर्न लागू गर्दा कुनै पनि मामला मा, ताले टोपी मा प्वालहरू मार्फत smudges रोक्न crumple छैन। प्रभाव बृद्धि गर्न, कहिलेकाहीं यो polyethylene फिल्म को प्रयोग सुझाव - यो थर्मल इन्सुलेशन, यसरी रासायनिक प्रतिक्रिया चमकती द्वारा त्वरित छ बढ्छ।
पर्खने समय सामान्यतया सफाई एजेन्ट लागि निर्देशनहरू मा निर्दिष्ट गरिएको छ। को अन्तराल को कठोरता र कपाल को मूल रंग फरक हुन सक्छ। सामान्यतया प्रक्रिया 15 45 मिनेट बीच छ। यसलाई अन्यथा बाल क्षतिग्रस्त हुन सक्छ, सिफारिस अन्तराल सामना गर्न महत्त्वपूर्ण छ वा परिणाम आशा पूरा गर्दैन। कारण वृद्धि porosity बाल प्रभाव गर्न यसो समय अघि उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ: यो आत्म-पालन स्पष्टीकरण हुनुपर्छ।
प्रक्रिया पछि, चमकती क्रीम टोपी हटाउने बिना बाल देखि राम्ररी rinsed गर्नुपर्छ। अर्को, एक headdress को टाउको फेरि स्पष्टीकरण पछि तिनीहरूलाई energize गर्न स्याम्पु र मायालु हालतमा आफ्नो कपाल धुन जारी र। बाल पुनर्स्थापना कुनै पनि स्पष्टीकरण पछि आवश्यक छ, त्यसैले कुनै पनि मामला मा यो चरण बेवास्ता गर्न सकिँदैन। घरमा रंगाई किरा प्रक्रिया पछि हेरविचार लागि हाइड्रेटिंग मास्क अक्सर समावेश गर्दछ।
अन्तिम चरण mitigate र रंग को दृश्य मतभेद रोक्न आवश्यक किसिमहरु toning छ। यो काम कम्तिमा तीन दिन पछि अनावश्यक रसायन आफ्नो कपाल अधिभार छैन, स्पष्टीकरण पछि, खर्च गर्न राम्रो छ।
राम्रो छ: एक टोपी वा पन्नी मार्फत जोड दिंदै?
राम्रो staining किसिमहरु योगदान किनभने विकल्प जोड दिंदै पन्नी अविश्वसनीय सान्दर्भिक छ। यसबाहेक, यो रंग गहिराई वृद्धि, धेरै टन काम गर्न अनुमति दिन्छ। Colorant कर्ल लेपित र पन्नी मा र्याप। यसरी पन्नी प्रत्येक पाना किनारा कम्तिमा एक सेन्टिमिटरले भित्री जोडेको छ (लिक जोगिन)।
कार्यान्वयन पन्नी संग जोड दिंदै लागि एक वस्तुको लागि बाहेक यस्तै सूची तयार गर्न आवश्यक छ - एक टोपी एक पन्नी बदलिएको छ, प्लस लामो टिप संग comb। र सहायक भूल छैन। एक्लै occipital क्षेत्र मा प्रक्रिया पालना अव्यावहारिक छ।
राम्रो छ कुन, एक टोपी वा पन्नी प्रयोग गरेर हाइलाइट: प्राय प्रश्न सोधे? जवाफ सरल छ - यी विधिहरू को स्पष्ट लाभ फरक उद्देश्यका छ संग: म्यानिफेस्टमा उल्लेखनीय प्राप्त गर्न Endeavoring छोटो कपाल (कुनै 15-20 भन्दा बढी सेमी) मा एक टोपी मार्फत विशेषताहरू। तर लामो कपाल लागि पन्नी प्रयोग विधि उपयुक्त।
सुझाव जब घरमा टोपी मार्फत जोड दिंदै प्रदर्शन
यसलाई पहिले किसिमहरु melirovannye पुन: staining गर्दा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन, यो कपाल संरचना गुणस्तर हानि पुर्याउन सक्छ।
बाल पहिले staining अघि, यो ओक्साइड को नकारात्मक प्रभाव लड्न अनुमति को एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रभाव सिर्जना गर्नेछ धोए हुन।
कुनै पनि स्पष्टीकरण खोपडी मइस्चराइजिंग को पूर्व-उपचार आवश्यकता छैन
एक एलर्जी प्रतिक्रिया हातमा एउटा सानो क्षेत्र, निर्देशन अनुसार रंग संरचना मा एक परीक्षण सञ्चालन गर्न राम्रो छ रोक्न।
पातलो र कमजोर बाल स्पष्टीकरण प्रक्रिया हतार हुँदैन लागि, यो राम्ररी बाल-व्यवहार पूर्व गर्न मनमोहक छ।
को पतली को "पंख" टोपी, अधिक प्राकृतिक परिणाम मार्फत थ्रेडिङ गरेर प्राप्त छन्।
शास्त्रीय विशेषताहरू र अञ्चल आवंटित। पहिलो प्रकार बाल सम्पूर्ण लम्बाइ, टोपी मार्फत पिरोया रङ लगाउन पनि समावेश छ। क्षेत्र - काम व्यक्तिगत क्षेत्रहरु संग बाहिर छ। "विषमता", "विकर्ण" pretornal को रंग संरचना को आवेदन, "अग्र-दल" र मध्यवर्ती staining अन्य थुप्रै प्रकारका: यो रचनात्मकता लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।
नियम, छोटो कपाल मा एक टोपी मार्फत जोड दिंदै यस सानो घर मा प्रक्रिया समयमा भन्दा कि खराब छ (फोटो लेख मा staining को परिणाम हो)। परिणाम तपाईं अनुरूप गर्दैन भने, यसलाई समाधान गर्न सजिलो हुनेछ। तर लामो कपाल थप गम्भीर। तपाईं सफलता विश्वास छैन भने, यो जोखिम लिन र सैलून मा मालिकको भरोसा छैन राम्रो छ!
"Nivea" - शैंपू को एक नयाँ पुस्ता (दायरा, समीक्षा)
छेउमा एक fringe सबै फिट!
Coronilla धब्बालगाइएको: वर्णन, संरचना, औषधीय गुण, र मूल्यांकन को प्रयोग
अस्ट्रिया झण्डा: के तपाईंलाई थाहा छ के छैन
तपाईंको लगइन र आफ्नो पृष्ठ कसरी परिवर्तन गर्ने?
चित्रकार - यो के हो? Rapidograph र चित्रकारों: फरक